Ahoana no fomba niady voalohany taorian'ny Joshua mavesatra taorian'ny Klitschko: sary | TeraNews.net
Ahoana no niady voalohany taorian'ny ady mavesatra an'i Joshua taorian'ny Klitschko: sary
mpanoratra Artem Navoaka tamin'ny 09.11.2017
Nahazo fandresena voalohany teo am-pelatanana niaraka tamin'ny mpifaninana niainga avy any Kamerona - Carlos Takama, ilay mpanao ady totohondry Okrainiana fanta-daza, Anthony Joshua. Tao amin'ny Stadium Millennium ao renivohitra Wales, Cardiff no niseho ny ady. Tadidio fa miresaka momba ilay anglisy mitovy izahay, izay ny taona 29 aprily 2017 tamin'ny taona knockout tao amin'ny Wembley Stadium any London dia nandresy ny lalao natao tamin'i Wladimir Klitschko.
Ny manampahaizana manokana momba ny fanatanjahantena dia mahita karazana hafahafa eo amin'ny soritr'ilay atleta mavesatra avy any Albion afovoany miaraka amin'ny afovoany afrikana. Raha ny fandehany fa ny mpanazatra Anthony Anthony dia nanomana ny atleta hiady amin'ny matihanina Bulgaria, Kurbat Pulev, izay noho ny ratra dia namoy ny hazakazaka 12 andro talohan'ny amboara eran-tany. Mba tsy hanafoanana ny fifaninanana dia nikaroka ny mpikaroka ilay mpikarakara ny mpikarakara. Nanjary sarotra ny nahita entana mavesatra, ary na dia ny avo noho izany aza, izay no nahatonga azy ireo nipetraka tao Cameroon.
Toa nahaliana ny mpankafy ny ady, izay efa tao amin'ny boribory 4 dia nankasitraka ny fiofanana sy ny herin'ilay paositra afrikanina, izay nandona an'i Briton. Na izany aza, efa tao anatin'ny fihodinana fahafolo, ny vintana dia nifindra nankany amin'ny Anglisy, izay nandresy tamin'ny tolona noho ny nandehanan'ny referee. Raha avy amin'ny alàlan'ny valin-kafatra avy amin'ny mpijery amin'ny tambajotra sosialy dia eo an-tongony i Takam ary afaka nanohy ny lalao, ka mametraka fanontaniana tsy mahazo aina amin'ny mpikarakara ny fifaninanana.
Raha ny filazan'ny mpandresy dia ny tsy fahampian'ny fiomanana no nanakana an'i Kamerona tsy hikapoka. Ny mpiasan'ny mpanazatra dia nanomana an'i Joshua hiady amin'ny Kurbat Pulev roa metatra, mampifanaraka ny endriny ary maneno amin'ny fitomboan'ny mpifaninana. Angamba ny hiara-miasa amin'ireo lehilahy kely kokoa dia hanampy ilay atleta hametraka ny Afrikanina taloha. Fa araka ny lazain'izy ireo dia tsy tsaraina ireo mpandresy - ny fehikibon'ny tompon-daka ary ny tehaka ny vahoaka an'arivony 75 dia mankany Briton Anthony Joshua.
Vokatra burner: tavy avy amin'ny Internet
Mamorona: fanatanjahantena fanatanjahantena - karazana, tombontsoa, ​​fahavoazana
Orbitrek inona no tsara kokoa amidy amin'ny trano
Vokatra hanatsarana ny fiasan'ny atidoha
Fitaovana kiraro 2020: niverina i Adidas Samba
Home Humidifier: CH-2940T Creta
© 2020 - Teranews. Zo rehetra voatokana.